हरमन मेलभिललाई सम्झँदै। 20 उसका कार्यहरूको महान वाक्यांश | वर्तमान साहित्य
हरमन मेलभिललाई सम्झँदै। 20 उसका कार्यहरूको महान वाक्यांश
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | मा अद्यावधिक गरियो 03/09/2018 18:17 | लेखकहरू, नोभेला
हर्मन मेलभिल आज भेट 199 बर्ष र यसको द्विशताब्दी अर्को वर्ष ठूलो उत्सव हुने प्रतिज्ञा गर्दछ। यो अमेरिकी लेखक, विश्व साहित्यको महान् मध्ये एक मानिन्छ, निस्सन्देह साहसिक उपन्यास को मौलिक संदर्भ, विशेष गरी ती मध्ये विकसित Mar, एक मजबूत र गहन मनोवैज्ञानिक घटकको साथ।
आज म ल्याउँछु 20 वाक्यांशहरू आफ्नो सबैभन्दा प्रमुख कामहरू बाट चयनित। हामीहरु मध्ये जो विधा शैली र सबै प्रकारको गन्ध मन पराउनेलाई प्रेम गर्दछौं समुद्र, जहाज र महान महाकाव्यहरू, अमर सेतो व्हेल को लेखक मोबी डिक हुनु पर्छ।
1 हर्मन मेलभिल को थिए?
2 उनको काम को २० वाक्यांश
2.1 प्रकार (१1846)
2.2 मोबी डिक (१ 1851 XNUMX१)
2.3 हल्कल, क्लर्क (१ 1853)
2.4 बिली बुड द नाविक (१ 1924 २XNUMX)
हर्मन मेलभिल को थिए?
उनको उपन्यासहरू, मेलभिल जत्तिकै गहन जीवनको साथ न्यूयोर्कमा जन्म भएको थियो उनी आठजना छोरामध्ये तीनजना थिए। जब उनका बुबा, एलन मेलभिलको मृत्यु भयो, परिवार अत्यन्त आर्थिक तनावग्रस्त थियो। यसैले, १1837 मा उनले समुद्रलाई पार गरे लिभरपूल जहाँ उनी काम गरिरहेका थिए। फर्किएपछि उनले सेवा गरे प्रोफेसर र १ 1841१ मा, २२ वर्षको उमेरमा, उहाँ यात्रा गर्नुभयो दक्षिण समुद्रहरू जहाजमा ह्वेल.
डेढ बर्षको क्रसिंग पछि, उनले डु ship्गामा जहाज छोडे मार्क्वास टापु र एक महिनासम्म नरभक्षीहरूको बीचमा बाँच्यो, जसमध्ये उनी अस्ट्रेलियाका एक व्यापारी जहाजमा भित्र पसेकोमा भाग्यो ताहितीजहाँ उनले जेलमा केही समय बिताए। उनले किसानको रूपमा पनि काम गरे, यात्रा गरे होनोलुलु र त्यहाँबाट उनी युएस नेवी फ्रिगेटमा भर्ना भए।
1844 मा ब्राउजि stopped रोकियो र उसले उपन्यास पूर्ण समय लेख्नको लागि समर्पित गर्‍यो र सामान्यतया उसको आधारमा समुन्द्रमा अनुभव। ती शीर्षकहरू थिए प्रकार, मार्डी वा रेडबर्न, अरु मध्ये। वा जस्तो बिली बुड, नाविक, एउटा अन्तिम कार्य प्रकाशित भयो जब मेलभिल लगभग बिर्सन पर्‍यो। अन्य शीर्षकहरू थिए पियरे, एक ठूलो विफलता, र दृष्टिकोणबाट कथाहरू, जसको खाता समावेश गर्दछ क्लर्क क्लक गर्नुहोस्.
उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध उपन्यास थियो Moby Dick, १1850० मा प्रकाशित, तर सुरुमा अस्वीकार गरियो। त्यसोभए यो विश्वव्यापी साहित्यको महान् कार्यहरू मध्ये एक बन्न पुग्यो, विश्वको चित्रण र रूपक र मानव प्रकृतिको लागि डु boat्गामा, पेक्वोड, सृष्टि गरिएको महान क्यारेक्टरहरू मध्ये एक कप्तान, क्याप्टेन आहाबले। उनले यसलाई समर्पित गरे नथनिएल हथोर्ने, एक लेखक जसले उहाँलाई धेरै प्रभावित गरे जसको साथ उनले १ with1850० मा मित्रता लिए।
उनको काम को २० वाक्यांश
गरीब जहाज! तपाईंको आफ्नै उपस्थितिले तपाईंको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ; यो कस्तो दयनीय अवस्थामा छ!
पहाडहरू र भित्रीहरू मात्र पृथक र मौन ठाउँहरू अवलोकन गर्दछ, शिकार जनावरहरूको गर्जनमुक्त र साना प्राणीहरूको केही नमूनाहरू द्वारा एनिमेटेड।
हाम्रो जहाज सबै प्रकारका रिलभरी र विकृतिमा समर्पण गर्यो। चालक दलको अपवित्र आवेग र उनीहरूको असीम आनन्दको बिचमा केही बाधा पनि मिल्दैन।
तर यी प्रतिबिम्बहरूले मेरो दिमागमा कतै विचलित गरे; समय बित्दै जाँदा म आफूलाई त्याग्ने थिएँ, र यदि कहिले अप्रिय विचारहरू ममाथि आयो भने म तिनीहरूलाई तुरुन्त खारेज गर्ने थिएँ। जब मैले कारागारमा राखिएको हरियो घेरको प्रशंसा गरें, म सोच्ने झुकाव थियो कि म "सपनाको उपत्यका" मा छु र पर्वत भन्दा बाहिर चिन्ता र चिन्ताको संसार मात्र छ।
व्हेलको खोजीमा हामी भूमध्यरेखाबाट गलापागोसको बीस डिग्री पछाडि यात्रा गर्दै थियौं; र हाम्रो सबै काम, हाम्रो पाठ्यक्रम निर्धारण गरेपछि, यार्डहरू समायोजित गर्नु र डाउनवाइन्ड रहनु थियो: राम्रो डु boat्गा र स्थिर हावाले बाँकी काम गर्दछ।
तपाईं मलाई इस्माइल कल गर्न सक्नुहुन्छ।
मानव पागलपन अक्सर एक चालाक र मिठो कुरा हो। जब तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं भागेको छ, सायद तपाईं भर्खर केही मौन र अधिक सूक्ष्म तरीकामा रूप परिवर्तन हुनुभयो।
केही जिज्ञासु मृत्युहरू द्वारा, जसरी सहरका फिलीबस्टरहरूमा देखा पर्दछ जसले अदालतको वरिपरि शिविर बनाउँदछ, त्यस्तै भद्र व्यक्तिहरू, पापीहरू सबैभन्दा पवित्र परिवेशमा प्रशस्त मात्रामा देखापर्दछन्।
यो कुनै नक्सामा छैन। वास्तविक ठाउँहरू कहिल्यै हुँदैनन्।
अन्धकारको माध्यमबाट जनावरको भविष्यको पछाडि शिकारीको चतुर दिमागको लागि पाइलटको लागि किनाराको रूपमा स्थापित छ। त्यसोभए यो सिकारीको यो विचित्र कौशल हो, पानीमा लेखिएको कुराको लौकिक क्षणिक कालखण्ड, सुख्खा भूमि जत्तिकै, सबै अभिप्राय र उद्देश्यहरूको लागि विश्वासयोग्य छ।
क्लक, क्लर्क (1853)
मैले भन्नुपर्दछ कि घना जनसंख्या भएका भवनहरूमा कार्यालय भएका धेरै सांसदहरूको चलन अनुसार, ढोकामा धेरै चाबीहरू थिए।
अह, खुशीले ज्योति खोज्छ, त्यसैले हामी यो निर्णय गर्छौं कि संसार आनन्दित छ; तर पीडा एक्लोपनमा लुक्छ, त्यसैले हामी न्याय गर्दछौं कि पीडा अवस्थित छैन।
तर उहाँ ब्रह्माण्डमा एक्लै एक्लै देखिन्थ्यो। एट्लान्टिक महासागरको बीचमा बिग्रिएको जस्तो केहि चीज।
म उनको शरीर मा भिक्षा दिन सक्छ; तर उसको शरीरमा चोट लागेन। उनको आत्मा बिरामी थियो, र म उनको प्राण सम्म पुग्न सकेन।
यो एक असामान्य र अव्यावसायिक तरिकामा विरोधाभासपूर्ण व्यक्तिको लागि अचानक उसको सबैभन्दा प्राथमिक विश्वासलाई विश्वास नगर्ने कुरा हो। उसले अस्पष्ट झलक झल्काउन थाल्छ, असाधारण जस्तो देखिन्छ, सबै न्याय र सबै कारणहरू अर्को पक्षमा छन्; यदि त्यहाँ निष्पक्ष साक्षीहरू छन् भने, यो तिनीहरूलाई सुदृढ पार्न केहि मार्गको लागि घुमाइएको छ।
बिली बुड, नाविक (1924)
सम्झौतापूर्वक भनेको सत्यको सधैं यसको असहाय पक्षहरू हुन्छन्।
यथार्थमा भन्ने हो भने, उनी ती समुद्री ब्वाँसाहरूमध्ये एक थिए जसका लागि नौसैनिक जीवनका कठिनाइ र खतराहरू, लामो युद्धको समयमा, इन्द्रियको आनन्दको लागि प्राकृतिक प्रवृत्तिलाई कहिल्यै बिगार्न सकेन।
यो कप्तान ती बहुमूल्य प्राणघातकहरूमध्ये एक हो जुन सबै प्रकारका पेशेमा पाइन्छ, नम्रहरू पनि; सबै प्रकारको व्यक्ति "एक सम्मानयोग्य मानिस" कल गर्न सहमत गर्दछन्।
जब युद्ध घोषित हुन्छ, के हामी, यो प्रभारी लडाकूहरू, पहिले परामर्श लिइएका छौं? हामी आदेशहरू पालना गरेर लड्छौं। यदि हाम्रो फैसलाले युद्धलाई स्वीकृत गर्छ भने, यो संयोग मात्र हो।
इन्द्रेणीमा कसले रेखा बनाउन सक्छ जहाँ बैजनी समाप्त हुन्छ र सुन्तला रंग सुरू हुन्छ? हामी र colorsहरूमा भिन्नता स्पष्टसँग देख्छौं, तर कहाँ, ठीक, पहिलो दोस्रो दोस्रोसँग अलमल्लमा हुन्छ? मानसिक स्वास्थ्य र पागलपनको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » हरमन मेलभिललाई सम्झँदै। 20 उसका कार्यहरूको महान वाक्यांश
विला वा चामेरोको २० बर्ष, लोरेन्जो सिल्भाद्वारा निर्मित पौराणिक सिभिल गार्ड जोडी।
एमिली ब्रोंटे। उनको २०० बर्षको लागि तीन प्रेम कविताहरू